चेक बाउन्स ? उजुरी दिनोस् ! यस्तो छ सजायको व्यवस्था - Nayabulanda.com
चेक बाउन्स ? उजुरी दिनोस् ! यस्तो छ सजायको व्यवस्था
नयाँ बुलन्द ९ चैत्र २०७५, शनिबार ०८:१० 127 पटक हेरिएको
काठमाडौं : बैंक खातामा पैसा नै नभइ चेक लेखेर दिनु कानुनी अपराध हो ।
बैंकले खातामा पैसा नभएको चेक फिर्ता गर्ने गरेको छ । यसरी चेक फिर्ता हुनुलाई ‘चेक बाउन्स’ भनिन्छ । चेक बाउन्स मुद्दामा नियमनकारी निकायको फितलो अनुगमन भएको र कारबाही गर्न प्रहरीले उदासीनता देखाएको पीडितको गुनासो छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा आफ्नो बैंक खातामा पैसा नै नभएको अवस्थामा चेक लेखेर दिनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । खातामा पर्याप्त पैसा नभएको जानीजानी चेक जारी गरेमा बैंकिङ कसुर मानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो चेक जारी गर्नेलाई बिगो भराइ बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्छ । तर, कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाउने गरेको पीडितको गुनासो छ । प्रहरीले चेक बाउन्सको मुद्दालाई प्राथमिकता नदिने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
कतिपय पीडितले त प्रहरीले नै चेक बाउन्सका अपराधीलाई भगाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । पछिल्ला दिनमा विभिन्न संस्था र नागरिकले खातामा रकम नै नभइ चेक लेखिदिने गरेको घटना बढ्दै गएका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महानगरीय परिसरमामात्र चेक बाउन्ससम्बन्धी एक हजार ५० ओटा उजुरी परेको छ ।
यीमध्ये काठमाडौंमा एक हजार २००, ललितपुरमा एक हजार १११ र भक्तपुरमा ३९ ओटा उजुरी परेका हुन् । यी सबै उजुरीउपर कारबाही अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली बताउँछन् ।
उजुरी लिन प्रहरी सक्रिय भएपनि कारबाही प्रक्रियामा भने उदासीन हुने गरेको पीडितको गुनासो छ । कानुनबमोजिम चेक बाउन्स भएको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्छ । केही पीडितहरुमा भने उजुरी दिन तीनपटक चेक बाउन्स भएको हुनुपर्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीकाअनुसार पहिलोपटक चेक बाउन्स हुनेबित्तिकै उजुरी गर्न सकिन्छ ।